Kingston Stanley | အလုပ်များ - အလုပ်ရှာဖွေရေးခရီးသွားခြင်းသင်၏ CV ကိုမည်သို့သတိပြုမိရမည်နည်း။
အန်တိုနီ Raj Jayamani LinkedIn ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်လိုက်
မေလ 18, 2019
Naveed Khan က: ဒူဘိုင်းအတွက်ပါကစ္စတန်၏ပုံပြင်
မေလ 19, 2019
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ Kingston Stanley
Kingston Stanley - ထွက်ရပ်နှင့်သင့် CV ကိုသတိပြုမိရဘယ်လိုနေသလဲ?
တစ်ဦးပြန်ကြားချက်ရဖို့ရုန်းကန်သမျှသောသူတို့အားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ခု - Kingston Stanley အလုပ်အကိုင်အပလီကေးရှင်းကနေအင်တာဗျူးဒီမှာကကူညီစေခြင်းငှါအနည်းငယ်ခြေလှမ်းများ။
တစ်လိုင်းမန်နေဂျာကိုသတိရပါ, စုဆောင်းမှုမန်နေဂျာသို့မဟုတ်စုဆောင်းမှုအတိုင်ပင်ခံ မကြာခဏပုံမှန် CV ကိုရဲ့ရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူရေလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ ကံမ, ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအရေအတွက် သူတို့ဥပဒေကြမ်း fit ပါဘူးရင်တောင်စုဆောင်းမှုတစ်ခု "scattergun ချဉ်းကပ်နည်း" ရှိသည်နှင့်ရှိသမျှသောအခန်းကဏ္ဍမှမိမိတို့၏ CV ကိုပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ငါအောက်ပါပြုပါရန်သင့်အားအကြံပေးမယ်လို့:
သာ, သငျသညျလုံးဝကိုက်ညီသောအခန်းကဏ္ဍမှလူကြီးမင်း၏ CV ကိုပေးပို့ ဘာသာစကားများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, ကဏ္ဍမှာအတွေ့အကြုံနှင့်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း။
မြေတပြင်လုံးကြော်ငြာဂရုတစိုက်ဖတ်ရန်နှင့်သင်တို့ရှိသမျှပုံးကို tick အာမခံပါသည်။
်ထမ်းခေါ်ယူမှုအေဂျင်စီများ သူတို့ရဲ့ client ကိုတစ်ခုအတိအကျကိုပွဲစဉ်များအတွက်အခကြေးငွေပေးဆောင်ပါလိမ့်မည်ကဲ့သို့သောနီးပါးအမြဲ, တိကျတဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံကိုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ, စက်မှုလုပ်ငန်းများပြောင်းလဲသွားမယ့်နှိုင်းယှဉ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဲဒီလို, ဒါမှမဟုတ်ကုမ္ပဏီများနှင့် (မထားတဲ့အေဂျင်စီတဆင့်) ကိုညွှန်ကြားသွားဖို့ဆန္ဒရှိသငျ့သညျ။
သင်တစ်ဦးအလုပ်ရှင်ကမှလူကြီးမင်း၏ CV ကိုစေလွှတ်ပြီပြီးတာနဲ့အဆိုပါငှားရမ်းမန်နေဂျာသူသည်တည်ထောင်ရန်နှင့်သင့်ပရိုဖိုင်းနှင့် ပတ်သက်. တစ်ဦးအမြန်5မိနစ်ချက်တင်ရှိသည်နိုင်လျှင်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။
, သင့် CV ကိုစလှေတျတျောထားပြီးဘယ်မှာခြေရာခံ Keep စနစ်တကျစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အတူစျေးကွက် map အလားအလာရှိသောအလုပ်ရှင်တစ်ဦးစာရင်းဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောဒူဘိုင်း Lynx, MEPRA, နပေုံ, Gitex, အာရေဗျခရီးသွားစျေးကွက်များနှင့်တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သူများနှင့်တွေ့ဆုံရန်အဖြစ်ကွန်ရက်ကဖြစ်ရပ်များကိုတကျရောကျပါ။ မကျြနှာကိုမှမကျြနှာကိုအစဉ်အမြဲအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
၏နောက်ဆုံးအနေနဲ့အခက်ခဲဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အင်တာဗျူးဖြစ်စဉ်ကို အင်တာဗျူးရဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီကြိုတင်ဘွတ်ကင်သောအခါ၌သင်တို့ကိုပြင်ဆင်နေအချိန်ဖြုန်းရုံသင့်ရဲ့သုတေသနလုပ်နေတာမပါဘဲတက်ကိုဖွင့်ကြဘူးသေချာပါစေ။
Kingston Stanley သွားရောက်ကြည့်ရှု
သငျသညျအင်တာဗျူး secure တခါကျနော်တို့ကိုလည်းအကြံပေးချက်များပူဇော်နိုင်ပါတယ်
ကုမ္ပဏီပေါ်တွင်သင်၏သုတေသနလုပ်ဖို့သတိရပါ။ အပိုင်း '' Us အကြောင်းက 'Read ဝက်ဘ်ဆိုက်၏နှင့်သင်ဘာဖြစ်လို့အကြောင်းကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောသည့်အခါဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးပါ သင်သည်ထိုသူတို့အဘို့အလုပ်ကိုင်ဖို့လို။ သင်တစ်ဦးနိုင်ငံစုံ, ကြီးမားတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်သေးငယ်တဲ့ startup အလုပ်လုပ်ချင်ရုံမပြောပါနှင့်။ client ကိုရန်သင့်အဖြေတွေကို SPECIFIC စေပါနဲ့။ ဝီကီပီးဒီးယားအပေါ်ကုမ္ပဏီ၏ပရိုဖိုင်းမှာကြည့်ရှိသည်, အဖြစ် ဤသူသည်သင်တို့သူတို့ကိုသင်အကြောင်းကိုသိထားဖို့လိုစာရေးပြောပြလိမ့်မယ်။
အင်တာဗျူးအတွက်အချိန်ပေါ်ရှိစေသတည်း။ အချိန်တွင်ငါးတဆယ်မိနစ်အစောပိုင်းဆိုလိုသည်။ လိုအပ်ချက်ဖြစ်လိုလျှင်သင်သွားနှင့်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေကြအတိအကျဘယ်မှာသိပါဒါ, ရှေ့ဆက်အချိန်အင်တာဗျူးတည်နေရာမောင်းထုတ်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာ အဲဒီမှာရဖို့ယူပါလိမ့်မယ်.
မင်းသေချာပါစေ အင်တာဗျူးအောင်မြင်မှုများအတွက်သင့်လျော်စွာဝတ်စားဆင်ယင် သင်တစ်ဦးအလားအလာအလုပ်ရှင်အပေါ်လုပ်ပထမစှဲကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးတရားသဖြင့်စီရင်ထားတဲ့အင်တာဗျူးကြောင့် သငျသညျကွညျ့ရှု, သင်ဝတ်ဆင်နေကြသည်ဘယ်အရာကိုဘယ်လိုအပေါ်အခြေခံပြီးခံရဖို့သွား။ ဒါကြောင့်အလုပ်တစ်ခုအင်တာဗျူးအဘို့အသင့်လျော်စွာဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့အမြဲအရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်ပါပဲ။
1. သင်ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုဘာသိရသလဲ - ဘယ်အချိန်မှာသူတို့ထူထောင်ခဲ့ကြသည်, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရုံးတည်နေရာ, ဝန်ထမ်းလူဦးရေစသည်တို့ကို
2. အဘယ်အရာကိုဒီအခန်းကဏ္ဍအကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားစေပါသလဲ - ဖြစ်နိုင်လျှင်အလုပ်ဖော်ပြချက်ထံမှတာဝန်များကိုသင်သိသေချာအောင်
3 ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြောင်းကိုပြောပြပါ - ဤမေးခွန်းတစ်ခုကိုဆိုလိုတယ် "ကျနော်တို့အသေးစိတ်အချက်အလက်ကိုသို့ငုပ်မတိုင်မီပညာရှင်ပီသစွာ, စကားပြော, ငါ့ကိုသင်မည်သူတစ်ဦးကျယ်ပြန့်ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးပါ။ "
4. အဘယ်ကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုငှားရမ်းသင့်သလဲ - သင့်ကိုသက်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကို / အလားအလာစဉျးစားကွညျ့
5 ။ သင့်ရဲ့အဓိကအားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုဘာတွေလဲ? အသီးအသီးအဘို့ဥပမာတစ်ခုရှိသည်။
6 ။ သင့်ရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဘာတွေလဲ? - စိတ်လက်တွေ့ကျကျ Be / အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
8 ။ သင်ဘယ်လိုဖိအားကိုကိုင်တွယ်သလဲ? - သင်သည်သင်၏အလုပ်ဦးစားပေးပုံကိုအကြောင်းကိုပြောဆိုပါ။
9 ။ သင့်ရဲ့လစာမျှော်လင့်ချက်များကဘာတွေလဲ?
10 ။ သငျသညျကြှနျုပျတို့အတှကျဘာမေးခွန်းများလဲ?
ရုံ key ကိုအရည်အသွေးများစာရင်းကိုမပြောပါနှင့်။ ရာထူးမှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်း - - 1 သို့မဟုတ်2သော့ချက်အားသာချက်အကြောင်းပြောဆိုခြင်းနှင့်သူတို့နှင့်အတူထ back ဥပမာများ။ အောက်တွင်သင်တို့အဘို့အခြို့သောစိတ်ကူးများပါ၏
1 ။ ကျွန်မအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်။ ကျွန်မမှန်မှန် client များအတွက်စာနယ်ဇင်းထုတ်အတူတူထားသို့မဟုတ် ငါ၏အဒါရိုက်တာများများအတွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်များအလွန်တိုတောင်းသောအသိပေးစာမှာ။
2 ။ ငါအကောင်းဆုံးဆက်သွယ်ပြောဆိုဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ယခင်အတွေ့အကြုံအများကြီးအလုပ်လုပ်အတူကျွမ်းကျင်စွာဗေီနှင့်အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်မည် ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်အောင်မြင်သောအဖွဲ့များ.
သင့်ရဲ့အားနည်းချက်ဆွေးနွေးခြင်းတစ်လှည့်ကွက်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ အင်တာဗျူးသင့် မွဲ အနည်းငယ်သာဆိုးကျိုးနှင့်အတူအပြုသဘောဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ဦးအစှမျးသတ်တိသို့သင့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားဖို့သတိရပါ။
1 ။ ငါ '' ဟုတ်ကဲ့ '' တွေအများကြီးပြောမယ့်စိတ်သဘောထားရှိသည်ပြုပါ အလုပ်လုပ်ငါ့ကိုပေါ်သို့လွန်ရန်နှင့်များသောအားဖြင့်အလုပ်ရှုပ်နေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်မည် task ကိုတကယ့်ကိုငါ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးရင်တောင်ပြီးစီးသည်အထိရုံး၌တည်၏။
အရေးကြီး: တစ်ဦးအပြုသဘောအချက်ပေါ်တွင်အားနည်းချက် finish ကိုရဲ့အဆုံးမှာ.
အင်တာဗျူး၏အဆုံးမှာအနည်းငယ်မေးခွန်းများမေးပါ အင်တာဗျူးနှင့်အတူတစ်ဦးအဆင်ပြေညျဆောကျ, ကဲ့သို့;
1 ။ သင်ကုမ္ပဏီအကြောင်းကိုအများဆုံးအဘယ်အရာကိုကြိုက်သလဲ?
3 ။ အဖွဲ့ထဲမှာလူဘယ်နှစ်ယောက်?
သငျသညျအကြှနျုပျကိုတဖနျကူးချင်ပါတယ်တစုံတခုကိုမျှရှိပါသလား? လာမယ့်ခြေလှမ်းများဘာတွေလဲ ?.
Kingston Stanley အကြောင်း
Kingston Stanley ဦးဆောင်အထူးကုဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြစ်ပါသည်အဆိုပါစျေးကွက်၏အပြည့်အဝ spectrum ကိုဖြတ်ပြီး client နှင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အတူသီးသန့်အလုပ်လုပ်အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်ဗြိတိန်၌တည်ရှိသည်, စျေးကွက်နှင့်နည်းပညာစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီ, အစောပိုင်း 2011 ကတည်းကဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့်နည်းပညာကဏ္ဍများတွင်.
ကျွန်တော်တို့သည်အသငျသညျကိုကူညီရှာဖွေမျက်နှာပြင်နှင့်သင့်များအတွက်စံပြကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ် ပေါင်းစည်းစျေးကွက်နှင့်နည်းပညာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အ, ကြှနျုပျတို့သင့်လျော်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏အကြီးဆုံးအများစုလက်ရှိနှင့်အရည်အချင်းပြည့်မီသောကွန်ရက်တစ်ခုရှိသည်။ သငျသညျအရေးတကြီးဖြည့်ရန်လိုအပ်ပါသည်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုသို့မဟုတ်လူသတ်သမားအစုစုကိုဖွစျစေ, သင်ကဒီမှာရှာနေတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ခိုင်မာတဲ့ကျင့်ဝတ်, ရိုးသားမှု, သမာဓိရှိနှင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး၏တိုင်လေးတိုင်ဖြစ်ကြပြီးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ထင်ဟပ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့န်ထမ်းများနှင့်ကျွန်တော်ကိုကိုယ်စားပြုသည်လူများ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခု ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ်များအတွက်ကောင်းသောလမ်းညွှန်ပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များအတွက်ဂျော့ဘ်။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူယခုသင်ကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်လမ်းပြသောအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ရရှိနိုင်သည်။